Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo Hay’adda Tayo oo shir laba maalmood ah qabtay -
Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo Hay’adda Tayo oo shir laba maalmood ah qabtay
Hay’adda la talinta ee Tayo iyo Isbahaysiga Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee Mareykanka ayaa shir laba maalmood socday ku qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Shirkan oo si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa doodihii barnaamijkaan oo labo qayb ahaa diirada lagu saaray is bedelka siyaasadeed ee dowladda cusub ee Mareykanka iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka.
Haddaba shirkan oo aad iyo aad uga duwanaa shirarkii iyo kulamadii horay looga bartay in ay qabtaan Soomaalida Mareykanka degan, ayaa waxaa goobtii uu shirku ka dhacay lagu soo bandhigay dood wadaag iyo aqoon is-weydaarsi Islaam naceybka kusii kordhaya dalka Mareykanka iyo waliba sharicyadda cusub iyo siyaasada Madaxweynaha dalka Mareykanka D. Trump ee sida gaarka ah u saameeynaya bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka.
Hamse Warfa oo isagu ah hogaamiyaha talinHay’adda la talinta ee Tayo iyo Isbahaysiga Hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed ee Mareykanka oo shirka furay ayaa marka koobaad u mahadceliyey dhamaan dadkii ka soo qayb galay shirka. Hasme ayaa sidoo kale dadweynihii tirada badnaa ee iyagu ka soo qaybgalay shirka uga waramay ahmiyada shirka loo qabtay iyo muhiimada uu leeyahay.
Madaxdii iyo Aqoon-yahaniintii shirkan lagu martiqaaday ee doodii hore ka qaybqaatay waxaa ka mid ah Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka mudane Ahmed Awad, Duqii hore ee Magaalada Minneapolis R.T., iyo Aqoonyahan Faisal Roble oo isagu ah maamulaha xafiiska Qorsheeynta ee Magaalada Los Angeles.